पशुपतिलाई ओमकुमारीको खुल्ला पत्र “तिम्रो काम यति मात्र होर भाइ”
प्रकाशित मिति : February 17, 2019
तिमीसँग प्रत्यक्ष भेट हुने अवसर मिल्दैन । चाहेर पनि तिमीलाई भेट्न सकिँदैन । एकाध कार्यक्रम बाहेक तिमीसँग प्रायः साक्षात्कार हुने अवसर पनि जुट्दैन । मलाई थाहा छ तिमी अलिक व्यस्त छौ, दौडधुप बढी छ । अझ यो बेला त फेष्टिवलको सिजन हो । तिमी झनै हतारमा छौ । त्यसैले मलाई यही एउटा सानो पत्रमार्फत तिमीसँग भलाकुसारी गर्न मन लाग्यो ।
आशा छ कुनै न कुनै माध्यमबाट तिमीले यो दिदीको शुभेच्क्षा प्राप्त गर्नेछौ, सुन्नेछौ या कुनै न कुनै माध्यमवाट यो पत्र तिम्रो नजरमा पुग्नेछ । भाइ, लोक गायनमा आफ्नो उचाई बनाइसकेका तिमी अर्थात एक श्रष्टा सर्जक पशुपति शर्मा । तिमीले रचना गरेका, स्वर भरेका हरेक सृजनाहरु सफल छन्, चर्चामा छन् ।
व्यवसायिक हिसाबले त झनै अब्बल छन् । अझ अहिले भर्खरै मात्र तिमीले स्वर दिएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…….’ भन्ने गीत त यति चर्चा परिचर्चामा रह्यो कि, अहो ! कल्पना भन्दा पनि बढी नै भयो सायद । छोटो समयमै निकै भाइरल बनेको र बनाइएको यो गीत मैले पनि दोहोर्याएरै सुने, हेरेँ । जसरी अरु सबैले सुन्नु भयो हेर्नू भयो र सेयर पनि गर्नु भयो । पक्ष–विपक्षमा हिजो–आज तमामथरी कुराहरु बजारमा आए । केही दिन सामाजिक संजालभरी यही विषयले सबैको ध्यान आकर्षण गर्यो । त्यो देखेर तिमीसँग यसै पत्र मार्फत भेट्ने ईच्छा जाग्यो मलाई पनि ।
प्रिय भाइ, तिमी सामान्य परिवारमा जन्मे, हुर्केर तमाम संघर्ष गरी आफ्नो करिअर, खासगरी लोक गायनकै क्षेत्रमा निर्माण गरेका र देशमै केही गर्न सकिन्छ भनेर सन्देश दिएका एक कर्मशिल व्यक्तित्व हौ । जस्तैः ‘मलाई अमेरिका यही मलाई जापान पनि यही……’
स्याङ्जाको एउटा कुनाबाट सुनौलो भविष्य खोज्दै काठमाडांै शहर छिरेका तिमी थोर–बहुत संघर्षले यो स्थानसम्म पक्कै आइपुगेनौ होला । किनकी म तिम्रो पारिवारिक अवस्थाबारे राम्ररी जान्दछु र चिन्दछु पनि । भाइ, आजको परिवेशमा तिमी, म र हामीलाई जस्तै जो कसैलाई पनि देशको चिन्ता होला, पक्का छ र हुनुपर्छ ।
पेशा, कर्म, कार्यक्षेत्र र बाध्यताका हिसाबले मानिस जो जहाँ भएता पनि देशको बारेमा सोच्नु र सोच्न पाउनु, चिन्ता प्रकट गर्न पाउनु, चासो राख्नु अनि आ–आफ्नो ठाउँबाट जे सकिन्छ केही न केही योगदान गर्नु हरेक नागरिकका लागि एक अनिवार्य शर्त हो । यो कुरा हाम्रा पिता पुर्खाले हामीलाई सिकाएको शिक्षा हो, छोडेर गएको अमूल्य सम्पत्ति हो र जिउँदो इतिहास पनि हो । जसका कारण केही गरौं भन्ने भावना व्यक्त–अव्यक्त हामी सबैमा हुन्छ र छ पनि ।
प्रिय भाइ, तिमी पनि त्यही एक आम नागरिक हौ । देशप्रतिको माया जरुर छ तिमीमा । विकास र समृद्धिका सवालमा तिम्रा पनि जरुर केही परिकल्पना छन् । भ्रष्टाचारका मामिलामा शून्य सहनशीलता तिम्रो पनि चेत हो, सन्देश हो । जस्तो अरु आम नागरिकको छ र हामी सबैको छ । भाइ, देशका बारेमा कसैलाई चिन्ता छैन भने त्यो एक आम नागरिक हुनै सक्दैन । त्यसैले सामान्यतयाः देशको बारेमा नसोच्ने जो कोही हँुदैनन् र छैनन् पनि ।
तिमी त झन् एक श्रष्टा र सर्जक हुनाका नाताले, संसारका तमाम कुना काप्चा पुगेका नाताले, हरेक जनताका दुःख–सुखलाइ गीत संगीतका माध्यमबाट उजागर गरी हरेक नयाँ सन्देश दिनुका नाताले पनि तिमी अझै ज्यादा देशबाट हरेक गलत हर्कतहरु हटुन्, निमिट्यान्न होऊन् सुशासन कायम होस्, स्वाभिमानपूर्वक काम गर्न, बाँच्न सबैले पाउनुपर्छ ।
देशमा त्यस्तो खालको परिपाटी निर्माण होस् ताकी संसारमा हामी अब्बल हुन सकियोस्, बेग्लै पहिचान बनाउन पाइयोस्, सकियोस् भन्ने नै होला । यस सन्दर्भमा म तिमीलाई हार्दिक सम्मान पनि गर्दछु । किनकी तिमीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्याै र अपिल पनि गर्याै । त्यसको लागि विशेष धन्यवाद तिमीलाई ।
तर भाइ, गीतका हरेक शव्दले तिमीले मैले र हामी हरेकले सोचे जस्तो सन्देश त दिएन नि ….! देशको एक मर्यादित संस्थामाथि निराधार जुन आरोप लगायौ नि त्यसले तिम्रो हाम्रो इमेज झन् बढाउला र ?? संसारमा नभएको मुलुक हाम्रो मुलुक र त्यो मुलुकका रैती तिमी, हामी रहेछौ नि हगि ?? सबैकुरा केही मिनेटको गीतको भिजुअल जस्तो सफाचट हँुदो हो त भाइ, मुलुक कस्तो बन्थ्यो होला हगि ?? केही प्रक्रिया, केही विधि, केही समय तिनका पनि त होलान् नि ?
कि छैनन् र ? अनि हरेक पार्टीका कार्यकर्ता केवल मुकदर्शक मात्रै र कुकुरहरु जस्तै होलान् र भाइ ?? हामी हरेकका पार्टी भित्रका संघर्ष तिमीले केही न केही त बुझेका पक्कै छौ नि, ती कम चानेचुने त छैनन् नि हगि ?? हरेक पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउन कम रगत पसिना त बगेका छैन होला नि जनता र कार्यकर्ताहरुको….? अनि बोलेनौ…बोलेनौ…बोलेनौ मात्रै भन्यौ बोलेका, लडेका र लेख्दै आएका कुरा कतै व्यक्त गरिदिएनौ हगि ?? यो अलि अन्यायपूर्ण भयो है भाइ ?? शुसासनको कामना, चाहना केवल आफ्नै बत्ख्वाँइबाट मात्रै पूरा होला कि असल चेत र प्रयत्न पनि चाहिएला भाइ ??
प्रिय भाइ, तिमीले यही गीतमा राज्यको प्रयत्नलाई जोड्न सकेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो होला…! विकेन्द्रीकरणका मर्मअनुसार यो एक वर्षको राज्यको अधिकार प्रत्यायोजनको प्रयासलाई उजागर गर्न सक्या भए हुदैनथ्यो र ?? राज्यका घोषित नीति कार्यक्रमहरु चाहे दीर्घकालीन होऊन् या अल्पकालीन होऊन्, तिनको उजागर गर्न सकेको भए निधार खुम्च्याएर निराश हुनु त पर्दैनथ्यो नि भाइ ?? सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा राज्यको कदम कम चानचुने निर्णय हो र भाइ ??
देशको स्थिरताका लागि मुलतः दुई पोलमा देशको राजनीतिलाई उभ्याउनु कम महत्वको विषय होला र भाइ ?? संघीयताका सवालमा यथास्थितिवादिहरुले निरन्तर विष वमन गरिरहँदा भटाभट तीन तहका राज्य संचालनमा ल्याउनु र जनताका अधिकार ढोकैमा पुर्याउनुलाई फगत छोटे राजाको संज्ञाले उडाइदिँदैमा इतिहासमा न्याय होला र भाइ ??
अनि सुनन भाइ, मैले नबुझेको कुरा श्रष्टाहरुको अधिकार मात्रै हुन्छ कि कर्तव्य पनि जोडिन्छ देशका लागी ? कि पेशा र रोजिरोटी भन्दैमा सबैकुरा तपशिलका ठहरिन्छन् र भाइ ?? तिम्रो ठाउँबाट पनि त देश विकासका सन्दर्भमा परिवर्तनका सन्दर्भमा केहि न केही होष्टेमा हँैसे हुनुपर्ला नि त भन्या ?? केवल बत्ख्वाँइ मात्रै गर्नु र तमासा मात्रै हेर्नु अनि पेशा र जिविकोपार्जनका निमित्त बाध्यता मात्रै ठान्नु तिमी जस्ता श्रष्टाहरुको कर्म यति मात्रै हो र भाइ ??
त्यसैले प्रिय भाइ, तिम्रो उद्देश्य पवित्र होला । देशको अवस्थाले गर्दा तिमी मर्माहत पक्कै छौ । पेट तिम्रो पनि जरुरी पोलेकै छ । यो कुरा म बुझ्दछु । तर, पछिल्लो एक दुई वर्षको अन्तरालमा देशमा राजनितिक स्थिरता र शुसासनका निमित्त भए गरेका प्रयत्नहरुलाई तिमीले बुझिदिनु पथ्र्यो, बुझाउन कलम चलाउनु पर्थो र आवाज बुलन्द पार्नु पर्दथ्यो अनि देश विदेशमा हामी कसरी विकास र समृद्धिका सवालमा तातेताते गर्दैछांै, स्वतन्त्रता अनि आफ्नो देशको स्वाभिमानका निमित्त हामी कसरी आफ्नै बाहुबलमा उभिँदै आएका छौ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्दथ्यो । तिमीले दुरदराजका जनतामा सुनौलो आशा र भविष्य जगाउन सक्नु पर्दथ्यो ।
तर, केवल निराशा मात्रै बाँडिदिँदा संसारभर पसिना चुहाउँदै गरेका आम यूवा तन्नेरिहरुले के सम्झँदै होलान् हामीलाई ?? अनि संसारले नेपाल र नेपालीलाई के ठान्दै होला यतिबेला ….., देश बद्नाम हुँदै गर्दा तिम्रो हाम्रो शिर उँचो होला र कतै ?? कुरा त्यसो मात्रै होला र भाइ ?? यो त अलि मिलेन कि भाइ … ।
अँ साँच्ची तिमीले करीब ८–१० मिनेटको गीतमा निकै निराश भएर सके लुट कान्छा भन्दै लुट्न प्रेरित गरेका ती सानो भाइ बरु कति स्वाभिमानी रहेछन् हगि ? कुनै हालतमा त्यसो गर्दिन नाइ नाइ मात्रै भनेर हातले इशारा गरिरहेका छन् । तिमीले सक्छौ भने देशमै लुट भन्दा मरि गए लुट्दिन पो भन्छन हगि ??
अनि सुनन, गीतको अन्तिम हरफमा तिमीले भने जस्तै केही न केही त बुझेउ होला यति भनेपछि भन्ने छ । त्यसमा ती सानो भाइले त्यत्रो ईशारा गरेर नाइ नाइ नाइ भनेपछि तिमीले पनि त केही बुझ्यौ होला नि हगि ?? लुट्न स्वाभिमानिहरु तयार रहेनछन् हगि भाइ ?? बरु नलुट्न प्रेरित पो गर्दैछन् त हगि ?? जे होस् आम सुझाव पछि तिमीले एक वक्तव्यमार्फत आफ्नो आशयलाइ सच्याएका छौ । तिमी कमजोरी महसुस गर्न सक्ने र तत्काल सच्याउन सक्ने सामथ्र्य भएका एक सचेत व्यक्तित्व पनि रहेछौ भाइ ! खुसी लाग्यो ।
स्रोत :सिम्पल अनलाइन डट कम